Nin Dulmi Dartii U Xidhnaa Muddo 25-sanno Ah Oo Qaatay Magdhaw Ka badan 6-Milyan Oo Dollar - Hablaha Media Network
Nin Dulmi Dartii U Xidhnaa Muddo 25-sanno Ah Oo Qaatay Magdhaw Ka badan 6-Milyan Oo Dollar
HMN:-Waxa uu sheegay Mas’uul ka tirsan maamulka deegaanka New York, in la bixiyay lacag qadarkeedu dhan yahay 6-milyan iyo 250-kun oo doollar , lana siiyay nin ku xidhnaa jeelka muddo 25-sanno, waxaa jeelka laga soo saaray April 2014-kii , waxaana shakhsigaa lagu magacaabayay Jonathan Fleming’s , kaasoo da’diisu ahayd 53-sanno .
maamulka New York Waxay gaadheen go’aan in la siiyo ninkaa dulmiga lagu xidhay lacag dhan 6-milyan iyo 250-kun oo doollar kadib markii uu ninkaasi ku xidhnaa dil aanuu gaysan muddo 25-sanno ah .
waxa uu sheegay Scott Stringer oo ahaa mas’uul ka tirsan maamulka New York “waxa uu jeelka ku qaatay kala badh cumrigiisii, waxaa la cadeeyay inaanay suura gal ahayn inuu dambigaa galay muddo 25-sanno ah kadib.
Waxa uu intaa kusii daray mas’uulkaasi “suura gal maaha inaan usoo celinno cumrigiisii ka lumay , laakiin waxaa maamulka u suuro gal ah inuu sameeyaa in la siiyo Magdhaw dulmigii uu la kulmay dartee.
Jonathan Fleming’s oo 53-jir ahi waxa uu jeelka kasoo baxay April 2014 markii la caddeeyay inaanuu wax dambi ah lahayn.
Sanadkii 1989-kii ayaa lagu soo eedeeyay inuu dilay ganasde maandooriyaha ka ganacsada meesha la yiraahdo Brooklyn ee waqooyi bari New York ka xigta uu ku dilay , isagoo joogay waliba meesha la yiraahdo Orlando oo waliba xagga koonfur bari Florida marka uu dilku dhacayay .
qaddiyadda Fleming waxay kamid tahay tobanaan qadiyadood oo ay dib ula noqodeen Maxkamadaha maraykanku , isla markaana keenay in la sii daayo dad badan oo eedaysanayaal ahaa.
Waxaana la filayaa inuu arinkaan ka dambeeyay nin Bolis ahaa oo la oran jiray Louis Skarcilla, waan qof hadda howl gab ah , isla markaana uu sameeyay wax isdaba marin khaldan oo ugu dambayn jeelka gaysay Jonathan Fleming’s si waliba dulmi ah.